Cabsidii ugu darneyd oo meesha ka baxday ka dib markii ay qoysasku heleen kuwii ay jeclaayeen | ICRC da Soomaaliya
Cabsidii ugu darneyd oo meesha ka baxday ka dib markii ay qoysasku heleen kuwii ay jeclaayeen
30/08/2021 , Maqaallo
“Ma aynaan ogeyn nolol iyo geeri waxa ay gabadheydu ku sugneyd. Qoyskeygu waxa uu ku jiray xaalad jahawareer ah oo ah in gabadha tacsi loo dhigo iyo in kale” ayuu yiri Macallin Xasan, oo ah oday 67 jir ah oo ku nool xaafadda Garasbaaleey ee duleedka magaalada Muqdisho.
Geerida qofka la jecelyahay ayaa lagu muujiyaa xanuun, murugo iyo hubanti la’aan. Qoysaska ayaa soo xira howsha aaska iyaga oo, waqti ka dib, iska la qabsada dhimashada qofkii ay jeclaayeen.
Nasiib darro se, boqolaal kun oo qof ayaa la la’yahay ama ay qoysaskooda kala lumeen adduunka oo dhan arintan oo ka dhalatay colaadaha hubeysan, xaaladaha kale ee rabshada wata, musiibooyinka dabiiciga ah, xaaladaha deg-degga ah ee bani’aadamnimo iyo tahriibka. Dad badan ayaanan la ogeyn halka ay ku suganyihiin.
Macallin Xasan, ayaa ka mid ah dadkaas. Gabadhiisa oo ah Asmara Macallin, ayey kala lunsanaayeen muddo 22 sano ah. Waxa ay aheyd 13 jir marka ay kala lumeen qoyskeeda iyaga oo ka qaxaya colaadaha sanadkii 1999-kii. Qoyskeeda ayaa ka soo guuray gobolka Shabeellaha hoose oo u soo guuray Muqdisho iyada oo aan la socon. Asmara waxaa caawiyay dariskeeda kuwaas oo markii danbe u guuray Yemen iyaga oo ay Asmara la socoto.
“Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa i soo wacay dariskeenii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose iyaga oo ii sheegay in gabadheydu ay badqabto oo aan taleefan kula xiriiro. Waxaan dareemay farxad badan qalbiguna wuu ii dagay” ayuu raaciyay.
Waxa uu la xiriiray Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS) si loo caawiyo maadaama uusan heysanin lacag ku filan oo ku wici karo gabadhiisa oo Yeman joogta.
“Hadda waan la hadlaa gadheyda habeen iyo maalinba. Waa xaas waxa ayna leedahay qoys ka kooban todobo caruur ah.” Intaas ayuu ku daray isaga oo dhoolla cadeynaya.
Macallin Xasan waxa uu ka mid dad yar oo nasiib u yeeshay in ay helaan kuwii ay jeclaayeen.
Magaalada Hargeysa, Aamina Axmed waxaa ka maqan wiilkeeda Maxamed Cali oo afar sano ka hor u tahriibay Yurub. Codsi baafineed ayaa waxaa furay Laanqeyrta Cas ee Finland si loo raadiyo hooyadiis oo daggan magaalada Hargeysa. SRCS-ta ayaa awood u yeelatay in ay hesho Aamina ka dib markii ay raadineysay muddo laba sano ah.
“Sanado badan oo aan wiilkeyga raadinayay ayaan aad u qalbi jabnaa. Hadda waxaan ku faraxsanahay in aan is-helnay oo aan taleefoonka ku wada xiriirno.” Ayey tiri.
Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS) ayaa ku caawiya qoysaska in ay xiriiraan iyaga oo adeegsanaya Farriimaha laanqeyrta Cas (RCMs), wicitaano dhanka taleefanka ah iyo barnaamijka raadinta wajiga oo ah– sawirro dhanka khadka intarneetka ah ee dadka raadinay ehelladooda ka maqan.
Sanadka 2021-ka, ICRC iyo SRCS waxa ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa 88 qof oo la la’aa. Intaa waxaa dheer, in ka badan 65,000 oo ah Farriimaha Laanqeyrta Cas (RCMs) ayaa la is-dhaafsaday waxaana ku dhawaad 54,000 wicitaano taleefan ah loo fududeeyay xubnaha qysaska kala maqan. Isugeyn tiro dhan 2,400 oo magac ayaa laga aqriyay “Barnaamijka dadka la la’yahay” ee BBC-da qeybteeda Soomaaliga ka baxa.